China Hot ire ere n'ọnụ ụzọ Ime Machine Atc 3 Axis Woodworking Machinery 1325 CNC Router Manufacturer and Supplier |Apex
3D CNC rawụta igwe
Ọnụ ụzọ osisi na-ekpo ọkụ na-eme igwe Atc 3 Axis Woodworking Machinery 1325 CNC Router
* Spindle ikuku jụrụ oyi anọ (HQD ma ọ bụ Italy HSD spindle nhọrọ), ịdị mma dị elu na 24h na-aga n'ihu.
* Ụgbọ okporo ígwè HIWIN, ezigbo occlusion na siri ike, enweghị mgbagha maka iji ogologo oge mee ihe.
* Mgbasa ngwa ngwa gia dị elu maka axis XY, yana nnyefe bọọlụ ziri ezi maka axis Z,
n'ịhụ oke ọsọ na oke nkenke n'otu oge.
* Pneumatic ATC maka 3 spindles nwere ngwá ọrụ dị iche iche. Ngwá ọrụ na-agbanwe agbanwe na-azọpụta oge iji aka gbanwee ngwá ọrụ.
* Okpokoro Vacuum na mgbapụta agụụ, nwere ike dozie ngwa ngwa na ngwa ngwa na tebụl maka ihe osise, na-echekwa oge na ogologo ndụ ọrụ.
* Usoro njikwa: Anyị na-eji Dsp dị elu, sistemụ nchịkwa Nc-studio, Syntec sitere na Taiwan ma ọ bụ OSAI sitere na Europ.
Nlereanya APEX1325 / APEX1530 / APEX2030 / APEX2040
Mpaghara ọrụ 2500* 1300mm / 3000* 1500mm / 3000 * 2000mm / 4000* 2000mm
Usoro njikwa Njikwa Ncstudio, nhọrọ NK280, SYNTEC
Ụgbọ ala na ndị ọkwọ ụgbọala Nzọụkwụ moto / Servo moto
Ụgbọ okporo ígwè nduzi Taiwan HIWIN square ndu okporo ígwè
Ụzọ nnyefe Ngwa ogbe ziri ezi dị elu
Nhazi okpokoro Vacuum na T-oghere table
Ọsọ na-arụ ọrụ 8-15m/min
Owuwu okpokoro Igwe igwe agbadoro agbadoro
Ike Spindle 3.5kw / 4.5kw/ 5.5kw/ 9kw ikuku jụrụ spindle
Ọsọ kacha 24000 RPM
Mbanye ugboro na-agbanwe agbanwe Ihe ntụgharị inverter / Delta inverter
Sistemụ jụrụ oyi Igwe ọkụ eletrik jụrụ
#Pneumatic 3 isi spindle jụrụ oyi:
3.5kw / 4.5kw/ 5.5kw ikuku jụrụ spindle
#Ụgbọ okporo ígwè nduzi ahịrị:
Ụgbọ okporo ígwè PMI/THK maka ịrụ ọrụ nke ọma na ọsọ ọsọ.Ọrụ nchekwa ike yana ogologo ndụ ọrụ.
#Yaskawa servo moto na ndị ọkwọ ụgbọ ala:
Anyị na-ewere Japan YASKAWA Servo moto, akara servo moto a ma ama n'ụwa maka ịdị mma ya nke ọma, na-agba ọsọ nke ọma, enweghị ịma jijiji na obere ọsọ, enweghị ọdịda nke ọma ọbụlagodi na oke ọsọ, ikike ibu siri ike, njikwa njikwa ntụkwasị obi, wdg.
# wheel aka:
Igwe ọkụ dị elu, nke ziri ezi nke CNC.Lelee n'ihu na ngọngọ 256 agbakọgoro tupu mgbe njikwa ntinye aka na-eme ka nleba anya na nhazi nke ọma.Jikwaa akwụkwọ akụkọ ngwá ọrụ, ndụ ngwá ọrụ, na ndị ọzọ.
WMH Herion helical rack na pinion draịva na-enye ngwangwa ziri ezi na nke siri ike.
Nhazi ha na-adịgide adịgide na-eme ka ndụ ọrụ dị ogologo na nhazi ntakịrị.Nwere ike ibugharị ibu dị arọ nke ọma.
# Mgbapụta Vacuum:
Gbaa jụụ jụụ.The 100% mmanụ-enweghị imewe na ogologo vane ndụ ana achi achi a ntakiri mmezi.
Ụlọ ọrụ ọdabara
(1) Ụlọ ọrụ na-arụ osisi:
Enwere ike iji igwe ihe osise rụọ osisi, igbe ihe ịchọ mma osisi, ngwaahịa ịchọ mma na ọla a pịrị apị na ihe ndị ọzọ.
(2) Ụlọ ọrụ mgbasa ozi:
Enwere ike iji igwe na-ese ihe maka ịkpụ ụdị akara dị iche iche, akara ngosi, baajị, ogwe, nka na ịchọ mma, ịchọ ụlọ.
(3) Ụlọ ọrụ ndị ọzọ:
A pụkwara iji ya mee ihe maka eserese, ọdịdị ala, calligraphy, akàrà na ihe osise ndị ọzọ na ihe osise na mmepụta ihe ndị ọzọ.
1.Tupu ire ere:
Anyị ga-anọrịrị ebe a iji nye ozi ọ bụla ịchọrọ na nke mbụ, ma nye ndụmọdụ ndị ọkachamara dịka mkpa gị siri dị n'efu;
2.N'oge ire ere:
Anyị ga-emeso ihe niile mmepụta na mbupu ihe, mgbe ihe niile dị njikere, anyị ga-agwa gị ihe niile na-aga nke ọma ebe a;
3.Mgbe ire ere:
Anyị ga-enye akwụkwọ ntuziaka na-arụ ọrụ ụdị Bekee.
4.Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla n'oge iji na ịnọgide na-enwe, anyị engineer ndị nwere ike na-asụ ezigbo bekee ga-aza gị online ma ọ bụ site na oku.
5.Machine akwụkwọ ikike bụ afọ abụọ.Ya mere, ọ bụrụ na igwe gị nwere mmebi ọ bụla n'amaghị ama, anyị ga-enye akụkụ n'efu.
Ọ bụrụ na igwe gị nwere nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na ohere ọ bụla, ndị injinia anyị ga-abata ebe ahụ iji dozie ma dozie ya.
Gịnị ka anyị kwesịrị ịṅa ntị mgbe ị na-etinye osisi cnc rawụta?
Mgbeosisi cnc rawụta zụrụ, ọ bụ ihe okike iji wụnye na debug.Ọbụna ma ọ bụrụ na onye nrụpụta na-enye ọrụ ndị dị otú ahụ, anyị kwesịrị imezi ya n'onwe anyị.Ya mere, anyị ga-amụta otú e si wụnyeosisi cnc rawụta nke ọma.Ya mere, ihe dị mkpa kwesịrị ịṅa ntị mgbe ị na-etinye a osisi cnc rawụta?
1. Ị wụnye naosisi cnc rawụta n'oge àmụmà ma ọ bụ égbè eluigwe, ma etinyela oghere ike n'ebe dị mmiri mmiri, ma emetụla eriri ọkụ na-enweghị mkpuchi, ma ọ bụghị ya, ihe mberede eletrik ga-adị mfe.
2. Onye nrụnye nkeosisi cnc rawụta ga-enwe nghọta miri emi nkecnc rawụta igwe, ma nwee ike ịrụ ọrụ ma jiri ya dịka nkọwapụta iji belata ohere nke ihe mberede.
3. The ike ọkọnọ voltaji nkeosisi cnc rawụta achọrọ ka ọ bụrụ 210V-230V.Ọ bụrụ na voltaji na-enye ọkụ adịghị eguzosi ike ma ọ bụ na-enwe ngwá ọrụ eletrik dị elu gburugburu, a ghaghị itinye ọkụ eletrik na-achịkwa n'okpuru nduzi nke ndị ọkachamara.
4. Shei nkeosisi cnc rawụta bụ nke ígwè, ya mere a ghaghị ijikọ waya ala iji hụ na nchekwa nke mmepụta.Ekwesịrị ịrụ eriri nkwụnye ahụ mgbe ike kwụsịrị, yana amachibidoro ịrụ ọrụ ndụ.
5. Akụkụ nke nhazi nke CNCrawụta nakweere ihe nkedo aluminom nke ụgbọ elu, nke dị nro ma dị nro, yabụ ejila ike dị ukwuu mgbe ị na-etinye skru ka ịzenarị.
Nke gara aga: Onye na-anakọta uzuzu
Osote: 3 Axis CNC Router Wood Carving Machine maka MDF Kitchen Cabinet Furniture
multi isi na spindles cnc rawụta
Multi isi cnc rawụta igwe
Igwe cnc osisi
igwe eji ebugharị osisi
igwe na-arụ osisi
ATC CNC rawụta na akpaaka Tool Changer Spin...
Ọrịre na ọnụ ahịa dị ọnụ ala 2030 isi ụgbọ ala 3D isii ...
Factory ozugbo na-enye 4 Axis Automatic Tool C ...
CNC Router Machine 4 Axis EPS maka ụfụfụ, osisi, A ...
4 Axis CNC Foam Cutter 2021 na-ere ọkụ